चीनमा छुन नसकेको कोरोना भाइरसले, नेपालमा भने छोडेन « News24 : Premium News Channel
विकुलक्ष्मी त्वानाबासु (कर्मचार्य),
भक्तपुर, १ असोज । भक्तपुरका एक जोडी, जुन जोडी चीनको हुवानमा महामारी फैलिरहेको बेला बेइजिङबाट सुरक्षितरुपमा नेपाल फर्किएका थिए ।
कोरोना भाइरस नेपाल भित्रिएपछि मात्र धेरै नेपालीले कोरोना भाइरसबारे थाहा पाए । तर जतिबेला चीनमा कोरोनाको महामारी फैलिएको थियो, त्यो बेला चीनको राजधानी बेइजिङ्गमा थियो यी जोडी ।
विकुलक्ष्मी त्वानाबासु (कर्मचार्य)
त्यहाँ एकहप्तामा अस्पताल बनाएर कोरोनाको विरामीलाई व्यवस्थित गरेको देख्दा हामीले सोचेका थियौं कि नेपालमा कोरोना आउदैन । कोरोना चीनमा नै सकिन्छ, भन्ने मनमा कुरा खेलाउँदै यसरी हामी नेपाल पुग्यौं ।
सबै परिवार खुुशी भए, हामी पनि खुसी भयौं । अब त मरिदैन भने मनमा महसुस भएको थियो मलाई । यता नेपाल आइसकेपछि हामी १४ दिन होम क्वारेन्टाइनमा बस्यौं ।
हामी त छानाबाट खसेका झै भयौं । चीनमा कोरोना संक्रमित हुन्छ भनेर भागेर आएका हामीलाई नेपालमा आएको ९ महिनापछि कोरोना भाइरस संक्रमित भएकोमा एकदम दुखी भएँ ।
एकचोटी त आँत्तिएका थियौं । सबैजना अब अस्पताल क्वारान्टाइनमा लाने हो कि सबैजनालाई छुटछुटै राख्छ होला कसरी बस्ने, के गर्ने के गर्ने भएको थियो । तर कोरोनाको केही सिमटम नभएको कारण हामी सबै होम आइसोलेसन मै बस्यौं ।
त्यसैले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय नै भनिरहेका छन् नि नेपालका कोरोना पोजेटिभ आएको सबै लक्षण भएको होइन् । लक्षण भएका केही विरामीहरुलाई अलि धेरै गाह्रो हुन्छ ।
लक्षण नभएको विरामीहरुले सरसफाई तथा खानपिनमा ध्यान दिएको खण्डमा निको हुने रहेछ । यो मेरो आफ्नो भोगाई हो । परिवारका १२ जना नै पछिल्लो परीक्षणमा नेगेटिभ आयो भर्खरै ।
मलाई हामी सबै कोरोना पोजेटिभ भएकालाई जेलमा राखिराखेको जस्तो महसुस भयो । घरमा बसेर नि के गर्ने । घरमा बस भनेको छ, घरमा बस्दा यस्तो गर्नुपर्छ, यस्तो गर्दा राम्रो भनेर गाइड गर्ने कोही छैन् ।
त्यस्तो गरेको खण्डमा पनि त उनीहरु फ्रेस महसुस गर्छन होला । घरमा मात्र बस भनेको छ सरकारले दिनभरि के गर्ने ?
कोरोना संक्रमितहरु त कोही घर बस्दा बस्दा डिप्रसनमा नै जान्छ कि जस्तो लाग्छ । त्यहि भएर कोरोना संक्रमितलाई दिनभरी केही गराउनु पनि पर्ने हो कि ? म पनि एक हप्ता जति त पूरै अब कोरोनाले मर्ने नै भयो कि जस्तो मात्र मनमा सोच आउने गरेको थियो ।
तर पछि मैले घरमा भएको कामहरु, रुमाल बुने, केही किताबहरु पढे, चित्र लेखें । अहिले हामी १३ जनाको परिवार सवै ठीक छौं, चीनबाट फर्किएका श्रीमान श्रीमति मात्रै होइन ।